आफूहरू एमाले मै फर्किने घोषणा : झलनाथ खनाल – Khabar Patrika Np
आफूहरू एमाले मै फर्किने घोषणा : झलनाथ खनाल
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: १:२१:०२
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूहरू पूर्वएमालेमै फर्किने बताउनु भएको छ । पेरिसडाँडा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा वरिष्ठ नेता खनालले नेकपा एमाले नेकपा एमालेकै बाटोमा र नेकपा माओवादी केन्द्र उसकै बाटोमा लाग्ने बताउनु भएको हो ।
खनालले एमाले मै गएर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । यो नै दाहाल नेपाल समूहको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठक हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपालले अदालत र नेता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समस्यामा पारेको बताएका छन् । उनले कान्तिपुरका विनु सुवेदीसँगको एक अन्तरवार्तामा यस्तो बताएका हुन् ।
अदालतको फैसलापछि साविकको एमालेमै पनि तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो परेको हो? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा माधव नेपाल भन्छन्, ‘हो । सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो । किन यस्तो भयो होला? यो त विचित्रै भयो ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘किन यस्तो गरेको होला? टा र्गे ट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति?’
अदालतको फैसलाले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेकपा एमालेका पूर्व नेताहरुलाई अचम्म र समस्यामा एकै पटक पारेको छ । एमालेमै फर्किन पनि उनीहरु नैतिक रुपमा सक्षम छैनन् । माओवादी केन्द्रमा बस्न उनीहरु कानूनी रुपमा नमिल्दो अवस्थामा छन् । यस्तो बेला आफ्नो भविश्य के होला भनेर नेताद्वय चिन्तित छन् ।